apple & apos; s airpods pro yave kudhura pane panguva amazon & apos; s prime day mhemberero (nyowani)
Kuru Nhau & Ongororo Apple & apos; s AirPods Pro yave kudhura pane panguva yeAmazon & apos; s Prime Day mhemberero (nyowani)
Bvuma icho, iwe mhando yezvakatarisirwa zvimwe kubva kuAmazon maererano ne Prime Day 2021 inobata paApple & apos; inotengesa-kutengesa AirPods . Yekupedzisira 2019-yakaburitswa Pro modhi, semuenzaniso, yakatengeswa neUS $ 60 dhisikaundi ... zvakare zvakare, iyo isina kunyatso kunzwa kufembera kana kupwanya pasi chero nzira.
Kazhinji inotengeswa pamubhadharo $ 249, zvine mutsindo iyo akanakisa asina waya mahebhu ane inoshanda ruzha kukanzura pamusika nhasi dzokera ku ... kutenderera $ 50 isingasviki iyo mushure mekupedzwa zviri pamutemo kweAmazon & apos; s Prime Day mhemberero gore rino.
Asi izvo & zvinowanikwa neWoot, kuenderera mberi kubhadharisa $ 189.99 yeiyo nyowani, isina kushandiswa, isina kukuvadzwa, uye isina kuvhurwa maAirPods Pros ine yakazara-gore-rewarandi inosanganisirwa uku uchikwanisa kuveura imwezve gumi muzana kubva iyo yakaderedzwa mutengo kana iwe & apos; uchida kusangana nemamiriro maviri akareruka.
Yechokwadi Wireless Earbuds ine Active Noise Kanzura, Nyowani
$ 17099$ 249Yapera
Zvese zvaunoda ndeye Amazon Prime nhengo , iyo yaunogona kunge uchinge watonyora kare, pamwe neiyo official Woot app. Nekushandisa iyo yekupedzisira pane yako iPhone kana Android ruoko kuodha yako chaiyo nyowani nyowani AirPods Pros, unogona kudzikisa mutengo wataurwa pamusoro kusvika muyero $ 171 kana zvakadaro nhasi chete.
Izvo zvinogona kunge zvisinganzwike zvisingakwanise kudhura, zvichidarika maMSRP emamwe akati wandei pamusoro-notch yechokwadi isina waya nzeve sarudzo dziripo izvozvi, asi kusvika patinogona kurangarira, zvakanyatso kuongororwa AirPods Pro hazvina kumbobvira zvakachipa pane izvi zvisina kugadziriswazve mamiriro.
Kana zvikaitika kuti wakarasikirwa nePrime-yakasarudzika yekuwedzera gumi muzana muzana mutero, iwe unofanirwa kunge uchikwanisa kuwana Apple & apos; s epamberi echokwadi e-wireless ma-earbuds parizvino pa $ 189.99 peya kune mamwe mazuva mashoma. Kana iwe unogona kugara wakamirira kuti kambani izarure yayo inotevera isiri-Pro AirPods musiyano , inotarisirwa zvakanyanya kukwereta iyo mamiriro-e-iyo-e-anoshanda ruzha kudzima tekinoroji uye tanga pamutengo wakaderera zvakanyanya kupfuura $ 249.
t nhare 55+ kuwedzera kwemutengo
ipad mweya 2 128gb dema chishanu
Apple Yekuona Chinyorwa 3 Ongororo
Samsung Galaxy Grand Prime Ongororo
Crazy specs, zvedongo kumashure. Iyi ndiyo Galaxy S10 + muCeramic White uye Ceramic Nhema!
LG V10 inotanga kugamuchira iyo Android 7.0 Nougat yekuvandudza